तपाईको लागि यो साता कति शुभ, कति अशुभ ? राशिफल हेर्नुहोस् « Postpati – News For All
शुक्रबार थप ११८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
जाजरकोटमा पहिरो: ७ जनाकाे मृत्यु, ५ जना बेपत्ता
असार १३, काठमाडौं | आज मिति २०७७ साल असार महिनाको १३ गते शनिबार | तपाईको यो साता कस्तो रहनेछ ? आजदेखि असार २० गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस् |
यो सातामा शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । विश्वास गरेकाले साथ दिनेछन् । अतिथिको रूपमा सत्कार पईनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । वित्तीय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,५ र शुभरङ्ग गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला । नगद सापटी लिएका आफन्तहरूले वचन पूरा नगर्दा आर्थिक झन्झट आइलाग्न सक्छ । मध्य साताबाट धार्मिक यात्राको योगछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,५ र शुभरङ्ग सिन्दुरे वा कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको आरधना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता रमाइलो र छोटो यात्राको सम्भावना समेत छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । राजननितक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । दैनिक कार्यमा सफलता पाईनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,७ र शुभरङ्ग निलो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
दाजुभाइ, दिदीबहिनीले तपाईंका सकारात्मक विचारलाई समर्थन गर्नेछन् । पराक्रम बढ्नुका साथै धन लाभका योग पनि देखिन्छन् । प्रेम जीवनपनि सफल रहनेछ । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउला । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,८ र शुभरङ्ग सेतो वा पहेंलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो समय निकै उत्साहजनक रहनेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । साथीभाई र आफन्तबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । बुधबारबाट प्रेममा बाधाका साथै बन्न लागेको काम विग्रनेछ । शैक्षिक क्षेत्रपनि कमजोर रहनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,५ र शुभरङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता माजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनछ । साताको अन्त्यमा बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग ध्वाँसे वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा कार्य गर्नु अघि वरुण भगवानको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता आदर्श ब्यक्तिको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ । समजबाट सहयोग मिल्ने देखिन्छ । साताको उत्तरार्धमा प्रतिद्वन्दी हरुले कार्यमा अवरोध ल्याउनेछन् । व्यापार व्यवसायमा वाधा आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,६ र शुभरङ्ग वैजनी वा सेतो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व भगवतीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता बन्धु बान्धव बाट सहयोग मिल्नेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ । आदर्श ब्यक्ति सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभ रङ्ग खैरो वा रातो रङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
यो साता शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय रहेकोछ । मध्य सातामा मनमा निरासा र शरीरमा आलस्य आउला । सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग घिउरङ्ग हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
साताको सुरुमा स्वास्थ्यमा गडबडी भई दैनिक कामकाजमा असर पर्नसक्छ । काम विगार्नेको सक्रियता रहनेछ । सोमवारबाट मनमा शान्ति छाउनेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । लामो समय देखि रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट सफलता अधिक मिल्नेछ ।
अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । व्यापार व्यवसायमा सफलता पाईनेछ । लामो समयदेखि रोकिएको कामको गाँठो फुक्नेछ । साताको मध्यमा नियमको अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छन् । शुभारम्भको चर्चापनि चल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवको आरधना गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता भाग्यले साथ दिने र इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । सामाजिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । यो धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । शैक्षिक क्षेत्रपनि राम्रै रहनेछ । साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग हरियो वा पहेंलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
२०७७ असार १३,शनिबार को दिन प्रकाशित
तपाईको आजको दिनचर्या कस्तो रहनेछ ? राशिफल हेर्नुहोस्
तपाईको आजको दिनचर्या कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस्
नेपाली गित संगितको बजारमा चर्चा कमाउदै "दुखि बाहुन" ।
गंगादेव रोल्पामा हेलिप्याड निर्माण सम्पन्न